← कविता : नदी बगिरहेको छ
नाटक : अप्रत्याशित →
पागल : खबरदार… ! यहाँ कसैले कसैलाई मार्न पाउने छैन… । ( युवकतिर हेर्दै ) एई… तँलाई के भो ? पिर परेकोछ ? किन बोल्दैनस् ? चुरोट खाको ? खै ले मलाई पनि । किन एक्लै खान्छस् ? कती खान्छस् एक्लै ? अझै अघाइनस् ? होइन, किन बोल्दैन यो ? के तेरो पनि भाई मर्यो ? के तेरो भाईलाई पनि तिनिहरुले मारे ? के तेरी स्वास्नीलाई पनि अपहरण गरे ? के तेरी अर्धाङ्गिनीको पनि बलत्कार गरेर हत्या भयो ? के तेरी मायालु पनि तँलाई छोडेर गई मलाई जस्तै ? तेरो प्रेम खोसियो ? ( युवक अझै बोल्दैन ) होइन, किन बोल्दैनस् हँ तँ ? कि यो मान्छे होइन… ? मूर्ती पो जस्तो छ । ( गलल हाँस्छ र एक्लै फतफताइरहन्छ ) थुइक्क… म पनि कस्तो नबोल्ने मुर्ती सँग पो गफ गरिरहेको रहेछु । ए तँ राम होस् ? कृष्ण होस् ? महादेव होस् ? कि अल्लाह होस् ? कि यशुख्रिष्ट होस्… ? होइन, होइन तँ बुद्द होस् । किनभने गुम्बामा तँ बस्छस् । हे भगवान ! मलाई माफ गरिदेउ । सारा चिजहरुको हत्या भइसक्यो । खाली मेरो खोक्रो शरीर मात्र बाँकी छ । बिन्ती चढाउँछु प्रभु, ति राक्षसहरुले गर्नु गरे । ( रिसाउँदै ) ए यो त भगवान होइन जस्तो छ । ( युवक अर्को चुरोट सल्काउँछ ) फेरी चुरोट पो सल्कायो यसले त… । यसलाई पनि पक्कै ठुलै पिर परेजस्तो छ । तेरो पनि भाई,स्वास्नी मेरो जस्तै हो…? पख्, अब हामी दुबै मिलेर खोजौं । ( छेउको लाशलाई देख्छ र चिच्याउँदै )एई,… यता हेर तेरो भाई यहाँ रहेछ । आरामले सुतिरहेको रहेछ । आइज, उठाऔं र लैजाऔं । ( लाशलाई चलाउँछ,छाम्छ, सुम्सुम्याउँछ र फेरी चिच्याउँछ ) भेटें… मेरो भाई भेटें । यो तेरो भाई होइन, मेरो भाई हो बुझिस्… । ( उठाउन खोज्दै ) उठ् मेरो भाई, कहाँ गएको थिस् मलाई छोडेर ? तेरी भाउजु खोइ ? ( शरीरभरी रगत देख्छ र झन् चिच्याउँदै ) तँलाई कसले यो हालत बनायो मेरो भाई ? तँ कती दिन देखी वेवारीसे छस् हगी ?
युवती : तिम्रो पवित्र प्रेमलाई लत्याएर म … ( भक्कानिदै ) त्यो रघुवीर को कुरामा लागें । उसले मलाई जिन्दगीका अनेकौं असम्भव सपनाहरु देखायो । नाना तरह ले फकायो । उसका हरेक चकलेटी कुराहरु साँच्चिकै जस्तो लाग्यो मलाई । उसका कुराले म दिन प्रतिदिन गल्दै गएँ । अन्तत: मैले उसँग विवाह गरेँ । उसले मलाई कहिल्यै घरमा लगेन र देखाएन पनि । ( झन् भक्कानिएर रुँदै ) एकदिन उसले मलाई एकान्त जङ्गलको बिचमा रहेको एउटा घरमा लाग्यो । त्यहाँ उसका केही साथिहरु पनि थिए । रक्सीले मातेका उनिहरु सबैले मलाई सामुहिक बलत्कार गरे । त्यसपछी बेहोस भएछु । ब्यूँझिदा अस्पातलको बेडमा थिएँ, मलाई कसले त्यहाँ लाग्यो पत्तो भएन । म त्यहाँबाट भागें । धेरै पटक मर्ने कोशीस गरें तर कसै न कसैले बँचाए । भनेको बेला बिष पनि नपाईने रहेछ । महिनौ बितिसक्यो, रघुवीर कहाँ हरायो थाहा छैन । जिन्दगीमा गरेको सानो भूलले आज म आफ्नै जीवन देखी डराउन थालेकिछु । पश्चातापको आगोले मलाई जलाइरहेकोछ । ( रुन्छे )
युवती : म.. म.. म… ( उसको गला अबरुद्द हुन्छ । )
युवती : मे… रो… ( फेरी रोकिन्छे )
पत्रीका व्यापारी : ( पानी परिरहेकोछ, प्लाष्टिकको आधा भागले टाउको र आधा भागले पत्रीका ढाकेकोछ । ख्याउटे शरीर एउटा हातमा पत्रीका हल्लाउँदै चिच्याउँदैछ ) लौ… आयो हजुर, ताजा खबर ! आज पनि राजाधनीको मुटुमै भिडन्त, तिस जनाको घटनास्थलमै मृत्‍यु, सयौं घाइते, सयौको अपहरण, मारिनेको संख्या अझै बढी भएको आशंका । लौ, पढिहाल्नुस् हजुर आजको ताजा खबर… ! ( प्रभाकर ले एउटा पत्रीका लिन्छ, पत्रीका व्यापारी एवम रितले कराउँदै अर्को दिशातर्फ मोडिन्छ । )
युवक : देख्यौ त अनामिका… ? यहाँ मृत्‍यु कत्ती सस्तो छ । अनि हेर यो पत्रीका व्यापारीलाई, कत्ती मिठो जीवन संघर्ष गरिरहेछ यसले । युवती : बाँच्न चाहने सबैले संघर्ष त गर्नै पर्दछ नि हैन र ?
This entry was posted in नाटक and tagged Ganesh Khadka. Bookmark the permalink.